Izindaba – Sivubela intuthuko Newspaper
NgoLwesithathu umhlaka 1 kuMandulo ku-2021, uMasipala wakwaMaphumulo uholwa uMeya uZibuyisile Khuzwayo-Dlamini kanye nePhini leMeya uZama Ncalane-Mhlongo, behambisana noSomlomo womkhandlu uCllr Simphiwe Shange noSihlalo wePortfolio Yabasha…
MAGAYE CELE SEZIQALILE ukusebenza ezinye sezitolo ezingaphakathi enxanxatheleni iMega City, eseMlazi eningizimu yeTheku. Lezi yizindaba ezimnandi ikakhulukazi kubantu bakuleli lokishi abasebenzisa le ndawo ukwenza izinto…
MAGAYE CELE USWELE amaphiko okundiza ugogo oneminyaka engu-70 yobudala ngesikhathi uNgqongqoshe wezokuHlaliswa Kwabantu kanye nemisebenzi yoMphakathi esiFundazweni iKwaZulu Natal, uMnuz Jomo Sibiya emgixabeza ngendlu entsha ceke. …
MAGAYE CELE IDOLOBHA iTheku eliholwa nguKhansela Mxolisi Kaunda likhale lemuka nendondo emqoka kakhulu yomklomelo wokuhlinzeka kahle ngamathuba okuhlomisa abasebenzi kanye nabahlali. Le ndondo leli Dolobha elihlomule ngayo ibizwa…
Mfanafuthi Nxumalo UDJ Sparks Bantwana wodumo lwengoma ethi Qolo lami ugqugquzele abesifazane bakuleli ukuthi bazibambe kwezemfundo. UDJ Sparks Bantwana ukusho lomhu ngesonto ngesikhai ebungaza usuku lwakhe lokuzalwa endaweni…
TSEPO MOTLOKOA ABE-LESBIAN, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex and Asexual (LGBTQIA) bakhothama kuhulumeni kazwelonke nowaKwaZulu-Natal ukuba ungabashiyi ngaphandle abantu abathandana nobulili obufanayo emikhankasweni…
TSEPO MOTLOKOA UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uthi isifundazwe sikhahlamezeke ngoR2 billion ngesikhathi lesi sifundazwe sibhekene nodlame lokucekelwa kwempahla nokutatshwa kwezitolo obekungenyanga edlule uJuly. …
TSEPO MOTLOKOA UNKK Neliswa Peggy Nkonyeni ophathiswe uMnyango wezokuThutha, ezokuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi KwaZulu-Natal uchome uphaphe legwalagwala amaphoyisa esifazane kulesi sifundazwe ngeqhaza alibambile ekuletheni…
IMEYA yoMkhandlu weTheku, uKhansela Mxolisi Kaunda iDolobha lakhe lithi osomabhizinisi abancane angeke bayikhokhe irenti izinyanga ezintathu zilandelana. MAGAYE CELE BATHI ncinci kamjoli osomabhizinisi abancane abaqashe…
MAGAYE CELE USIMON Ngomane oyiNhloko yeKomiti lezobuChwepheshe kwinhlangano iSouth African Coaches Association uthi sesifikile manje isikhathi sokuthi abalolongi baseNingizimu Afrika nabo bathole ukwesekwa abakudingo njengoba kusuke…